खेलौना र DIY, कसरी आफ्नै खेलौना बनाउने - Ikkaro
खेलौनाहरू बच्चाहरूको लागि मुख्य सामग्री हुन्। सबै जना खेलौनासहित हुर्कन्छन्, संसाधन नभएका देशहरूमा पनि, जहाँ उनीहरूसँग खेलौना छैन, तिनीहरूसँग जे उपलब्ध छन् उनीहरूसँगै बनाइन्छ।
DIY को खेलौना प्रयास गर्ने विचार गर्नुहोस् वा कसरी खेलौना आफैं बनाउने भन्ने काम मैले थाहा पाए पछि आए अरविन्द गुप्ता Years बर्ष अघि टेड वार्तालापमा। यो भारतीय आविष्कारक पुनर्नवीनीकरण सामग्रीबाट खेलौना बनाउन र डिजाइन गर्न समर्पित छ र उसको विरासत प्रभावशाली छ।
इक्कारोमा म यस विषयवस्तुमा विशेष रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्दिन, तर घरको बनाइएको, रिसाइकल गरिएको र सजिलैसँग पहुँचयोग्य सामग्रीको साथ साधारण खेलौनाहरूको डिजाईन एकदम आकर्षक छ र म अधिक गहिराईमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु।
यदि अरविन्द भन्छन्:
बच्चाले आफ्ना खेलौनाहरूसँग गर्न सक्ने उत्तम कुरा उनीहरूलाई तोड्नु हो
म त्यसलाई थप्नको अतिरिक्त थप्न चाहान्छु, तिनीहरूलाई बनाउनुहोस्। उसलाई ती उत्पादन गरौं। यो आत्म-शिक्षा, प्रेरणा र रचनात्मकताको लागि एक मार्ग हो।
मलाई याद छ जब म सानो थिएँ, सबै कुरा मैले कागज, कार्डबोर्ड, स्टिकहरू, ढु stones्गा र अन्य खेलौनाहरूको साथ गरे ...।
सीडी बाहिर स्पिनि top शीर्ष कसरी बनाउने
हामी जाँदै छौं रिसाइक्ड सामग्रीबाट घर बनाउने कताई शीर्ष बनाउँनुहोस्। यस अवस्थामा हामी पुराना सीडी वा डीभीडीहरू प्रयोग गर्छौं जुन अब उपयोगी छैन। यो बच्चाहरूसँग गर्ने गतिविधि हो। हाम्रा बच्चाहरूसँग, वा स्कूल, गर्मी स्कूल, आदिमा कार्यशालामा।
हामी धेरै चीजहरूको लागि क्रियाकलापको फाइदा लिन सक्छौं, बताउनुहोस् केaजाइरोस्कोप र यससँग प्रकार्यहरू र उपयोगिताहरू वा ती सानो छन् भने, हामी तिनीहरूलाई कम्पासको प्रयोग गर्न, सामग्री काट्न र पुन: प्रयोगका लागि सिकाउन सक्छौं। होईन स्पिनरको प्रकार :) तर यसको बावजुद म संगमरमरको संस्करणबाट १'1० more भन्दा बढि कताई गरिरहेकोमा अचम्मित भएँ।
लेखलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ जुन स्पिनि top शीर्षको निर्माणका दुई तरिकाहरू हुन्। पहिलो र साधारण3भागहरू प्रयोग गरिन्छ, CD / DVD, एक मार्बल र प्लग। दोस्रो पुरानो निर्माण हो जुन एक इन्स्ट्रक्टेबल लेखमा आधारित थियो र बनाउन केही जटिल छ। धेरै होइन, तर साना बच्चाहरूको लागि कम उपयुक्त।
मैले एक भिडियो बनाउने प्रयास गरें ;-)
स्पिनरहरूशैतानका ती खेलौनाहरू जुन सबै बच्चाहरूलाई ड्राइभ गर्दछन् र केहि पागललाई भाग लिन्छन् यस भागमा (र अझ पागल शिक्षकहरू पनि) इकर्कोमा पुगेका छन्। तिनीहरू एक शरीर हुन्छन्, सामान्यतया धातु वा प्लास्टिकको बनेको हुन्छ, जुन केन्द्रिय असरसँग जोडिएको हुन्छ जसको वरिपरि तिनीहरू घुमाउँछन्। यो आन्दोलन, केहि कारणले हामी यसलाई मनपराउँदछौं।
तिनीहरू एडीएचडीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछन्, एकाग्रतामा सुधार, तनाव घटाउने, आदि, यद्यपि केहि पनि प्रमाणित छैन। तिनीहरू २० अमेजनमा सर्वश्रेष्ठ बेच्ने उत्पादनहरूको सूचीमा जान सक्षम भएका छन्। स्पिनर ज्वरोले सबैलाई छक्क पारेको छ। तिनीहरूसँग एक पनि छ Reddit मा च्यानल जहाँ हामी धेरै, धेरै रोचक जानकारी फेला पार्दछौं।
बच्चाहरूको लागि रमाईलो घर बनाउने खेलौना
केहि लाईन मा खेलौना र परियोजनाहरु कि हामी छोडेर गइरहेका छौं त्यसैले तपाईं उनीहरूसँग आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरु हामी यसलाई छोडदछौं स्पिनि। खेलौना.
साच्चिकै सरल तर यसले तपाईंको बच्चाहरू वा भतिजाहरूसँग सँगै समय बिताउन सक्छ।
अन्तिम परिणाम यो जस्तो छ।
मलाई थाहा छैन कि यस खेलौनाको नाम छ कि छैन, तर यो घरका साना बच्चाहरूसँग गर्न उत्तम हो।
यो धेरै सरल छ र तिनीहरूले पक्कै रमाउनेछन् आफ्नै खेलौना बनाउने।
भिडियोमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यसले कसरी काम गर्दछ र प्रभावले यसले सिर्जना गर्दछ।
एक प्रकारको अण्डा भित्र टेक्नोलोजी
को किन्डर आश्चर्य अण्डा तिनीहरू ती सानो साना गोली हुन् जसले बच्चा भित्र बाहिर निकाल्दछ जुन हामीले भित्र राख्न जारी राख्छौं।
प्रत्येक चोटि म एक देख्छु मलाई आशा छ कि त्यहाँ कुनै पुतली छैनमँ जम्मा गर्न केहि चीज चाहान्छु र खेलौना डिजाइन गर्नेले यस पोष्टलाई प्रेरणा दिए बधाई हो।
PVC पाइपको साथ खेलौना कसरी बनाउने
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ? तपाइँका खेलौनाहरू निर्माण गर्न म्याकेनोको रूपमा पीभीसी पाइपहरू प्रयोग गर्नुहोस्?
ठिक छ, हामी तपाइँलाई के प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर केहि उदाहरणहरू छोड्दछौं।
यी सबैमा हामी तरवारहरू, त्रिशूलहरू, पिस्तुलाहरू, टेबलहरू, इत्यादि थप्न सक्छौं।
स्लिंगशटहरू बनाउने धेरै तरिकाहरू छन् र एक दिन हामी घरेलु स्लिंगशट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं। जब म पेशेवर स्लिंगशटको बारेमा कुरा गर्छु ... पढ्न जारी राख्नुहोस्